umatshini wokuthunga iswekile,ingqolowa
Ngaba uyatyala irayisi?, ingqolowa, iimbotyi, isuntsu okanye amabele? okanye ukwishishini lezolimo? Ukuba ufuna umatshini wezolimo ukuze ubabhule, kutheni ungakhethi ishelu yokutya okuziinkozo ezininzi? Ndiyakuthembisa ukuba uyakufumana isibonelelo esikhulu kumatshini wokucheba iinkozo ezininzi.
Umatshini wokutyhula iinkozo ezininzi usetyenziselwa ukubhula iinkozo, pearl millet, isisu, isoya,irayisi,Ingqolowa kunye ne-adzuki bean.I-Millet ye-Paarl sisondlo esineenkozo ezikhula kwezinye zezona ndawo zixhaphake kakhulu indlala e-Afrika, ukuvelisa isivuno esithembakeleyo esomileyo, amaqondo eshushu asemgangathweni omileyo womhlaba. Nangona i-pearl millet ingoyena ndoqo wesondlo kwabo bahluphekayo basemaphandleni, Ukuveliswa koomatshini bokugcina iinkozo kunye nokubanako ukuthengisa kuthintelwe kukungasebenzi kakuhle kunye nokusebenza okunyanzelekileyo kokusebenza kwendabuko.I-Victor brand yokusebenza kwemilenzi yokuthengisa umaleko yenzelwe ukunceda amafama amancinci ukuba andise isivuno sengqolowa ngeli xesha kunciphisa ukudinwa kwabo.. Umatshini wokuthungela i-injini yedizili ungabakho ngokudibeneyo ngamasibambisane, amakhaya ngamanye, okanye ngamashishini, abanakho ukucubungula ukutya okuziinkozo ngokulula kwabo kwaye bayisebenzisele ukusetyenziswa kwalapha ekhaya, okanye uthengise kwiimarike zalapha ekhaya.
Lo matshini wokugcina ukutya okuziinkozo uyilwe ngokweemfuno ezahlukeneyo zezinto ezifumaneka emanzini, Zoba intsebenzo yezinye izinto, Lo matshini wokusasaza iinkozo ezisebenzayo zamkele ukusetyenziswa kombane wesigaba esinye,Isakhiwo esifanelekileyo nesilula ,Umsebenzi ozinzileyo nothembekileyo uhlengahlengiso kulula ukuyisebenzisa, engagcini nje ngokugcina umsebenzi kodwa futhi inciphisa ubuninzi babasebenzi .Ngaphantsi kwenqanaba lokulahleka kunye nokubhula okuphezulu, Umatshini wokucoca .umatshini wokugcina amanzi unokuzicombulula ngokufanelekileyo iimfuno zokubhula okuziinkozo kwaye unokuvelisa izibonelelo ezingcono zezoqoqosho nezentlalo uninzi lwabalimi kunye namashishini emveliso..
Iimpawu zomatshini oshushu weenkozo ezisebenzayo
1.Ukusebenza umatshini wokudla okuziinkozo olusebenzayo kwaye usebenza kakuhle kwaye unokubhula kakhulu irayisi kunye nengqolowa kakhulu. Umatshini wokukhulisa i-Millet thresher uneempawu zokwenza icompact, ubume obuhle kunye nokusebenza okuqinisekileyo. Iboniswe ngenqanaba layo lemveliso ephezulu, ukusebenza okuhle kokubhula kunye nokulahleka okuncinci kwengqolowa njl., umatshini wokuthunga umbona uluncedo oluncedo kunye nabalimi. umatshini osetyenziselwa ukusebenzisa izilwanyana ezisebenza nzima ezininzi uneendlela ezininzi ezibanzi, ilungele kwaye ikhuselekile, ukusebenza ngempumelelo okuphezulu, inqanaba lomonakalo ophantsi kunye nenqanaba lokulahleka okuphantsi.
2.Umatshini osebenzayo we-sorghum sheller ngokuyintloko wenziwa yimoto,iiracks, screen concave, isigubhu, ikhava, umlandeli ophambili, yesibini fan fan, Iscreen eshukumayo, Ukucoca kunye nokuhlalisa.umatshini wedizili yemayile yedizili ixhaswe nge-3kw motor yecandelo elinye, injini ye-petroli okanye injini yedizili .
3.ukubhula kwesisu umatshini usebenzisa umsantsa phakathi kwamazinyo entonga yentsimbi kunye neplate yendlela, emva kokuba imbewu yokusanhlamvu isusiwe ngokujikeleza, iring, ukubamba, ukubetha,Xa usebenza, Umatshini wokudla okuziinkozo ezininzi. kusetyenziswa iibhubhu komoya kunye nengca etyhutyhutyha ngokwenziwa komoya kunye nescreen eshukumayo som fan. Imbewu yengqolowa kunye nengca kugqibe ukubhula ukwahlula kunye nokuhluza umsebenzi kube kanye, kunye nenqanaba lokususa kufikelelwe 99%.
Umgaqo wokusebenza komatshini wokuhambisa izinto ezininzi
Umshini wezinto ezininzi ezisebenza ngokuzonwabisa une-hopper yokutyisa, isigubhu, Iscreen kunye nesherifu.Idibanisa ukubhula, ukwahlula, ukucheba ingca xa iyonke kwaye kungasetyenziselwa ingqolowa, irhasi, irayisi, isisu, Millet, iimbotyi kunye ne-rapeseed.Uyilo olukhethekileyo olubhekisa kwi-inlet enkulu luyenza ikulungele ukubeka izinto eziluhlaza. Ukwengeza,Kungcono ukhethe izityalo kunye 80% ukufuma,ezinokuthi zinciphise izinga lokuphuka.
Xa umatshini wokuhambisa izinto ezininzi usebenza, izityalo zondliwa ngokuqhubekayo nangokulinganayo. Isityalo sahlulwe kwisiqu ngokuxabana, extrusion, ukungqubana kunye nokungcangcazela phakathi kwe-rack kwisigubhu kunye nesikrini. Emva kokudla okuziinkozo kwahlukaniswe nesiqu, kwaye isiqu sivuthelwa ngumnxibelelanisi fan. Ngeli xesha,iibhlothi ziphuma kwenye indawo.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokufumana iinkozo ezininzi
Injini yombane / injini ye-petroli / injini yedizili
Injini yombane / injini yedizili
Isixhobo sokukhulisa iinkozo eziinkozo ezininzi
Ukutyisa iinkozo ezininzi
Umatshini wokugcina ukutya okuziinkozo ukuze kufunyanwe ukubhula kunye nokubhula